भात खाइखाइ स्लिम बन्न मन छ भने अपनाउनुहोस् यी फर्मूला – Sawal Nepal ||The Power of Information
एजेन्सी २०७६ माघ ७, मंगलवार १५:५१ मा प्रकासित
एजेन्सी/ आफ्नो मोटो शरीरलाई फिट बनाउने चाहना कसको पो नहोला र ? हुन पनि हामीमध्ये धेरैले आफ्नो शरीरलाई फिट बनाउने चाहनामा भात खान छोडिरहेका पनि हुनसक्छौँ । एशियाली देशमा त झन् यो क्रम बढी हुन्छ । किनकि एशियामा सेतो चामलको भात खाने परम्परा छ ।
मोवाईल व्यवसायीको सामाजिक कार्यक्रम
महान व्यक्तित्वहरुका १० महत्वपूर्ण भनाईहरु
कसरी बन्ने असल शिक्षक ?
सुत्दाखेरी सिरानीमुनि राख्नुस् कागती, हुनेछन् यस्ता फाइदा
जुत्ता लगाउन नजान्दा पनि बिग्रिन्छ भाग्य, ज्योतिष शास्त्र यस्तो भन्छ